Desktọpụ Genymotion: versiondị ọhụrụ 3.1.0 dị maka 2020 | Site na Linux
Desktọpụ Genymotion: Ọdịdị ọhụrụ 3.1.0 dị maka 2020
Maka ndị na-amaghị ngwa Mgbagha, ọ bụ Gam akporo emulator maka Linux, nke pụtara ìhè igbu (ulateomi) rụọ ọrụ nke ọma dị iche iche ngwaọrụ mkpanaka (dị ka ekwentị na mbadamba), nke enwere ike ịgbakwunye ụfọdụ ihe ma ọ bụ ihe mejupụtara ya, dị ka ROM, Ngwa na egwuregwu nke sistemụ arụmọrụ gam akporo, na ụdị dị iche iche nke ya.
Ọzọkwa, n'oge a afọ 2020, ndị mmepe nke otu ihe ahụ, emeela ka ndị ọrụ niile nke ngwaahịa ahụ nweta, a ụdị ọhụụ n'okpuru nọmba 3.1.0, nke na-eweta ozi na atụmatụ ndị na-adọrọ mmasị.
Kwa afọ 2, anyị na-ezigakarị banyere Genymotion iji mee ka ndị na-agụ akwụkwọ anyị mara. Oge mbụ anyị mere ya na afọ 2016, n'oge ahụ, e nwere 2.6.0 mbipute, na dị ka ọ dị na mbụ, anyị na-akuzi otu esi ebudata, wụnye ma jiri ya. Akwụkwọ a bụ ihe ndị a:
Mgbe ahụ maka afọ 2018, n'oge ahụ, e nwere 2.12.1 mbipute, anyị na-arụ otu ọrụ ahụ site na akwụkwọ na-esonụ:
Site na nke a ọnwa Eprel na afọ 2020, 3.1.0 mbipute, nke gunyere site na mbipute gara aga nke anyị kọwara, mgbanwe ndị dị mkpa na akwụkwọ ọhụụ, nke anyị ga-ekwuputa obere oge n'okpuru.
1 Desktọpụ Genymotion 3.1.0
1.1 Ymdị Desktọpụ Genymotion 3.0.0
1.2 Ymdị Desktọpụ Genymotion 3.1.0
Desktọpụ Genymotion 3.1.0
Na-eso, ndị mgbanwe kachasị ama nke mbụ version nke Usoro Mgbasaozi Genymotion 3 na nke ugbu a version:
Ymdị Desktọpụ Genymotion 3.0.0
Firstdị nke mbụ a nke usoro 3 gụnyere mmelite zuru ezu nke njirimara onye ọrụ dabere na Nhazi Ihe, iji meziwanye ma nweta ahụmịhe onye ọrụ mmiri. N'ụzọ dị otú a, iji nye ọhụụ ọhụrụ ma mara mma nke dị nso na nke SaaS nke Genymotion Cloud.
Ihe ngosi ohuru a nwere ihe nzacha di omimi iji mee ka odi mfe ichota ngwaọrụ na ndebiri site na iji otu ịpị, na ndepụta ahaziri iche, ịchekwa gị oge.
Beendị VirtualBox gụnyere na Windows installer ka emelitere na 5.2.22.
Ewelitela wijetị Map site na onye na-eweta maapụ Google na Mapbox.
Gụnyere gam akporo 9.0 achịcha sistemụ.
lee ihe na Genymotion 3.0 dị ugbu a (Dec, 2018)
Ymdị Desktọpụ Genymotion 3.1.0
Versiondị a na-eweta mmelite dị ukwuu na nsụgharị nsụgharị, na-emewanye arụmọrụ na nsụgharị ọhụrụ nke gam akporo, karịsịa na MacOS.
Banyere wijetị igwefoto, ụdị a nke 3.1.0 na-abịa site na idegharị nke nkwado igwefoto na wijetị dị mfe. Nke a ideghari na-enye arụmọrụ ka mma ma na-edozi igwefoto na MacOS Catalina.
Ugbu a, ọ na-akwado sistemụ ikike MacOS Katalina ọhụrụ, yabụ, ngwaọrụ ndị nwere ike ịchọ rịọ ikikere iji igwefoto na igwe okwu n'oge, wee chọpụta mgbe enyere ikikere mgbe ọ na-agba ọsọ.
Gụnyere mmezi interface ndị ọrụ. Ọmụmaatụ: Ntughari nke ngwaọrụ dị iche iche ka akwaga na ọkachamara dị iche, enwere ike ịnweta site na bọtịnụ ihe osise ọhụrụ "+" n'elu ndepụta ngwaọrụ ahụ Nke a na-enye ọhụụ dị ọcha ma na-ehicha ihe ma na-ebelata ngwa ojiji nke CPU.
lee ihe na Desktọpụ nke Genymotion 3.1.0 (Apr, 2020)
"Desktọpụ Genymotion bụ gam akporo emulator nke gụnyere usoro ihe mmetụta na atụmatụ zuru ezu iji mekọrịta gburugburu ebe obibi gam akporo. Site na Genymotion na Desktọpụ, ịnwere ike ịnwale ngwa gam akporo gị n'ọtụtụ ngwaọrụ dị iche iche maka mmepe, nnwale na ebumnuche ngosi. Genymotion Desktop dị ọsọ ọsọ, dị mfe ịwụnye, ma dị ike site na wijetị mmetụta na njirimara mmekọrịta dị mfe iji. Ọ dị maka Windows, macOS na sistemụ arụmọrụ Linux". Ozi ndị ọzọ na Genymotion Desktọpụ Akwụkwọ
Na a n'ọdịnihu mbipụta, anyị ga-zuru ezu ọzọ na download, echichi na iji usoro, nke ugbu a agbanwebeghị nke ukwuu, yabụ ị nwere ike ịga n'ihu na-eji nke a kọwara na mbụ anyị Ntọhapụ 2018, na-enweghị isi nsogbu ma ọ bụ mgbanwe. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ibudata ya ozugbo pịa ihe ndị a njikọ.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere ihe ọhụrụ 3.1.0 mbipute nke mara mma ma na-arụ ọrụ Gam akporo emulator maka Linux akpọ «Genymotion», nke e ji agba ọsọ na-agba ọsọ nke ọma na ngwa ngwa dị iche iche nke ekwentị mkpanaaka (Ekwentị na Mbadamba), nke enwere ike ịwụnye gam akporo ROMs, Ngwa na Egwuregwu; bụrụ otutu mmasị na ịba uru, Maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Desktọpụ Genymotion: Ọdịdị ọhụrụ 3.1.0 dị maka 2020
PICCORO LEnz MCAY dijo
Amaghim ya .. ma site na ntughari .. ya mere .. Enwere m olile anya na anaghm eri nke ukwuu .. Aga m agbali ya ..
Zaghachi PICCORO LEnz MCKAY
Ekele Piccolo! Olileanya na ọ na-emezu ebumnuche ma ọ bụ mkpa gị.
Distros sitere na ndị ọzọ a maara nke ọma: Feren OS, Tromjaro na Lion OS